Tsvuku tsvuku pasi pemeso
Tsvuku tsvuku pasi peziso - chiratidzo chokuti mumuviri zvimwe zviitiko zvinoputsika. Chiratidzo ichi chinoratidzira mafungiro uye chirwere chechiropa, inogona kuva kuratidzwa kwemoyo kusakatika uye dermatological matambudziko. Kunyange zvakadaro, kana nzvimbo tsvuku ichioneka kamwe pasi pemaziso, iyo ibhanji inoratidzika. Tichakuudza nzira yekusiyanisa chirwere chimwe kubva kune imwe.
Zvikonzero zvikuru zvekuonekwa kwemavara matsvuku pasi pemeso
Edemas uye mavara matsvuku pasi pemeso ndeimwe yezviratidzo zvikuru zvekushaya simba rekuita basa uye iyo yose yakasununguka seyese. Inogona kuva matombo uye jecha, chirwere chinopararira, kana kushaya mafungiro. Chero zvazvingava, iyo ndiyo muviri wakabatanidzwa unofanirwa kuongororwa kutanga. Zvichida, ruyamuro ruchaunza kudya kusina munyu uye nekuramba tsika dzakaipa, asi iwe unotofanira kushanyira chiremba. Dzimwe nguva nzvimbo dzakadaro zviratidzo zvekudhakwa, apo chirwere chacho hachina kugadzirisa chete itsvo, asiwo chiropa nemukumbo. Muchiitiko ichi, pane chimwe chiratidzo - ganda rinotarisa uye rinopisa.
Kufukura kwakanyanya pasi pemaziso, zvichibva kune cheekbones, chiratidzo chekuvapo kwechirwere chemwoyo. Muchiitiko ichi, mavara acho akajeka zvakasiyana nemafungiro uye mararamiro akasiyana nechepamusoro pechimiro chakanaka chinotarira.
Pane zvimwe zvinokonzera kuzvimba uye kubwinya:
kushayikwa kweB vithamini;
kushungurudzika nekushaiwa kwekurara;
iyo yakaratidza kufungidzira kwedoro.
Zvirwere zvakaperekedzwa nehutsvuku nezvimwe zviratidzo
Muchiitiko apo tsvuku dzvuku pasi pemeso zvinotyisa, kuputika nekucheka kunoonekwa, kune zvikonzero zvekufungidzira seborrheic dermatitis . Pachinhu ichi, ganda riri pasi pemeso evanhu vane dermatological zvirwere hachina simba, asi chirwere ichi chinoda kukura pahutanda hwakasvibira uye husina kuchena hwemaofi, kunyanya pasi. Kufungidzira kunowanikwa apo zvinokonzera kuitika zvinowanikwa. Kunyanya inoshushikana nemiti inokonzerwa neyakadaro:
Kana iwe uri mambakwedza ekuonekwa kwemavara anotsiviwa nekuchengetedzwa kwemazuva ose, antihistamine ichabatsira kugadzirisa dambudziko racho.
Kana iyo tsvuku tsvuku pasi pemeso yakanyanyisa, zvinogona kunge zvakagadziriswa zvinokonzerwa nehutachiona - kuguruva, kutonhora, mapoleni emiti, zvokudya. Nokunyaradza mitsipa, iwe unogona kutora tablet yeDiazolin , asi kungobvisa zviratidzo usati washanyira chiremba. Iyo inokurumidza iyo miviri inosungirirwa, zvishoma zvishoma kukura kwezvinetso zvakadai seQuincke's edema uye kuporesa kusungwa.
Kuumbwa kwemazino emasuo
Дшиши Cши C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Nei eyelashes ichibuda kunze?
Matambudziko mushure mekudzirwa kwezino
Kuchenesa kwemazino - 8 nzira dzekunaka kuchena mumuromo
Caries kurapwa - nzira dzakanakisisa dzekugadzira mazino nhasi
Tsvina dzakachena pamiromo
Chamomile for face
Dhandi yevhu yechiso
Aphthous stomatitis inokurumidza uye inobudirira kurapwa
Ndinokwanisa here kushambidza muromo wangu ne hydrogen peroxide?
Ectopic pregnancy - zvinokonzera
St. Michael's Palace muSt. Petersburg
Calcitovirus mumakati - zviratidzo
Netsoka netsoka kushambadza
Ndezvipi zvokudya zvine vitamini B5?
Nemhaka yei mashizha akaoma pamuchero yemarato?
Pane kuderedza kunhuwa kwemukaka wekaka?
Hysteria - zvinokonzera uye nzira dzokurapa
Kuchenesa mushure mekunyora kwezino nokuda kwemafuro ekuporesa
Nzira dzepamutemo dzekutora pamuviri
Mushonga Wokurapa muGynecology
Manheru ekurovedza vana
Ungasunga sei chido chekugadzira nenzano?
John Voight uye Angelina Jolie
Manicure pasi pemucheka wakaoma
Mashizha - sei kubvisa mishonga yevanhu?
Sei pearari isingaiti uye inobereka michero?